Gaaffii Abiyyi Ahimad, Taayyee Danda’aa, Shimallis Abdiisaa fi Addisuu Araggaatiif! – Kichuu
Gaaffii Abiyyi Ahimad, Taayyee Danda’aa, Shimallis Abdiisaa fi Addisuu Araggaatiif!
Seera uummama waan taheef gaafa tokko du’uun keessan hin oolu!Gaafa duutan maaliin yaadatamu barbaaddu? Hojii siin waliin du’uu moo hojii du’a keessan booda jiraatu hojjettanii du’uu barbaaddu? Maqaan keessan reenfa keessan waliin akk awwaalamu moo awwaala gubbaatti akka hafu barbaaddu?
Du’a keessan booda sabni Oromoo maaliin maqaa keessan akka dha’u barbaaddu? Awwala keessan irraa dhaabbatanii seenaan akkamii akka siinif dubbifamu barbaadu? Seenaa warra immiyyee keessatti armaxamaxamuu moo seenaa saba guddaa kana keessa calaqqisuu barbaaddu? Gaaffilee kana qalbitti naa qabadhaa! Deebiin siin gaaffii kanaaf laattan har’a yoo jiraattanis, boru yoo duutanis! Waan sabni kuni boru seenaa keessatti ittiin siin yaadatu har’a dalaguu dandeessu!
Kaleessa dogoggora hedduu raawwattanii jirtu. Kaleessi darbeera. Dogoggorri kaleessa tasuma hin sirreeffamuu garuu irraa baratama. Dogoggora kan biraa akka hin uumne kan kaleessa irraa baruun ammoo dirqama namaati!
Yoo waan sabni kun jaalatu dalagdan, laphee saba kanaa keessatti haftu. Garuu har’a ofittuumman waan saba kana qalbii cabsuu dalagnaan bara abaaramaa boollaa xiqqoo keessatti awwaalamtam sana irratti hancufni isinitti tuufama yaadatamtu.
itti gaafatamumma seenaa jala bahuuf kaleessa irraa barattanii yeroo qaalii har’a qabdan kanatti fayyadamuun, waan gaarii sabni kuni itti boru isiin yaadatu akka dalagdan gorsa koo daa’imummaan siin gorsa!
Oromoon Gurmaa’e Mo’ataadha!